Ngwa mkpanaka | January 2020
Isi Ngwa mkpanaka
Njehie com.android.phone na android - esi edozi
Otu n'ime ihe ndị nkịtị na-emekarị na gam akporo smartphones bụ "Njehie emeela na ngwa com.android.phone" ma ọ bụ "Usoro com.android.phone ahụ kwụsịrị", nke na-emekarị mgbe ị na-akpọ oku, na-akpọ onye na-ese okwu, na mgbe ụfọdụ enweghị usoro. Nke a nkuzi kọwaa otu esi edozi nje com.android.
Ejiri Error ngwa ma ọ bụ ngwa kwụsịrị na gam akporo
Otu n'ime nsogbu ndị nwere ike izute mgbe ị na-eji ekwentị gam akporo ma ọ bụ mbadamba ụrọ bụ ozi na-egosi na ụfọdụ ngwa kwụsịrị ma ọ bụ "N'ụzọ dị mwute, ngwa ahụ akwụsịla" (nakwa, ọ dị mwute na usoro ahụ akwụsịla). Njehie nwere ike igosipụta onwe ya na ọtụtụ nsụgharị nke gam akporo, na Samsung, Sony Xperia, LG, Lenovo, Huawei na ekwentị ndị ọzọ.
Otu n'ime nsogbu ndị nwere ike izute mgbe ị wụnye ngwa apk na gam akporo bụ ozi: "njehie syntax" bụ njehie mgbe ị na-etinye ngwugwu na otu bọtịnụ Ok (Error Error). Maka onye ọrụ novice, ozi dị otú a nwere ike ọ gaghị edozi ya kpamkpam, ma, ya mere, ọ gaghị edozi otu esi edozi ya.
Otu esi eji gam akporo dị ka igwefoto onyunyo video
Ọ bụrụ na ị, nakwa na enweela m agadi ejirila ekwentị gam akporo ma ọ bụ ụfọdụ ndị na-enweghị ọrụ smartphones (dịka ọmụmaatụ, na agbagwo agbagọ), ọ ga-adịrị ha mfe iji ngwa bara uru. Otu n'ime ha - eji ekwentị gam akporo dị ka igwefoto IP ga-atụle n'isiokwu a. Kedu ihe ga - arụpụta: IP-igwe n'efu maka onyunyo vidiyo, nke a nwere ike lee site na Intaneti, arụ ọrụ, gụnyere site na ije na etiti, n'otu n'ime nhọrọ - ichebe ederede na njem na nchekwa igwe ojii.
Mmezi nyocha nke Wi-Fi na mbadamba na ekwentị
Otu n'ime nsogbu kachasị mkpa mgbe ị jikọtara ekwentị gam akporo ma ọ bụ mbadamba ka Wi-Fi bụ njehie nyocha, ma ọ bụ naanị "Zọpụta, WPA / WPA2 nchebe" mgbe ị gbalịsiri ike jikọọ netwọk ikuku. N'isiokwu a, m ga-ekwu banyere ụzọ m maara iji dozie nsogbu nyocha ahụ ma ka jikọọ na Ịntanetị nke netwọk Wi-Fi kesara, nakwa ihe omume a nwere ike ime.
Android anaghị ahụ Micro SD kaadị nchekwa - esi edozi
Otu n'ime nsogbu ndị nwere ike ịchọta site na ịtinye kaadị nchekwa SD Micro na ekwentị ma ọ bụ mbadamba - Android naanị anaghị ahụ kaadị ebe nchekwa ma ọ bụ gosipụta ozi na-ekwu na kaadi SD adịghị arụ ọrụ (ngwaọrụ SD kaadị abaghị uru). Akwụkwọ ntuziaka a kọwara n'ụzọ doro anya ihe kpatara nsogbu ahụ na otu esi edozie ọnọdụ ahụ ma ọ bụrụ na kaadị ebe nchekwa ejighị ngwaọrụ gam akporo gị.
Samsung Dex - ahụmahụ m nke iji
Samsung DeX bụ aha nkà na ụzụ nke na-enye gị ohere iji Samsung Galaxy S8 (S8 +), Galaxy S9 (S9 +), Nyocha 8 na Nkọwa 9, yana Tab Tab S4 dị ka kọmpụta, jikọọ ya na nyocha (adabara TV) site na iji ọdụ ụgbọ mmiri kwesịrị ekwesị -Station Station DeX ma ọ bụ DeX Pad, nakwa dị ka iji USB-C-HDMI USB (naanị maka Galaxy Cheta 9 na Galaxy Tab S4 mbadamba).
Otu esi emeghe igodo nke m chefuru gam akporo
Echefuru m ụkpụrụ ahụ ma amaghị m ihe m ga-eme - ịtụle ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ smartphones na mbadamba gam akporo, onye ọ bụla nwere ike ịnagide nsogbu ahụ. Na ntuziaka a, achikọtara m ụzọ niile iji kpughee ụkpụrụ na ekwentị ma ọ bụ mbadamba na gam akporo. Na-adaba na nsụgharị gam akporo 2.3, 4.4, 5.0 na 6.
Otu esi ebufe faịlụ site na kọmputa gaa na ekwentị ekwentị na azụ
N'ozuzu, Amaghị m ma ọ bụrụ na isiokwu a nwere ike ịbara mmadụ uru, dịka ịnyefe faịlụ na ekwentị na-emekarị ka ọ ghara ịme nsogbu ọ bụla. Ka o sina dị, m na-amalite ịkọ banyere ya, na nke isiokwu ahụ m ga-ekwu banyere ihe ndị a: Nyefee faịlụ na waya site na USB. Ihe kpatara eji ebugharị faịlụ site na USB gaa na Windows XP (maka ụdị ụfọdụ).
Esi budata ngwa site na Ụlọ Ahịa Google
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ibudata faịlụ apk nke ngwa gam akporo na kọmputa gị site na Ụlọ Ahịa Google (ọ bụghị naanị), ọ bụghị naanị pịa bọtịnụ "Wụnye" na ngwa ngwa ahụ, dịka ọmụmaatụ, iji wụnye ya na Emulator android. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ pụkwara ịdị mkpa ibudata ngwa nke nsụgharị nke ngwa ahụ, kama ọ bụ Google kachasị ọhụrụ.
Otu esi eji ekwentị Android ma ọ bụ mbadamba dị ka òké, keyboard ma ọ bụ gamepad
Enwere m akwụkwọ na nso nso a banyere otu esi ejikọta ndị ọzọ na gam akporo, ma ugbu a, ka anyị kwuo banyere usoro mmeghachị: iji igwe ekwentị na mbadamba dị ka keyboard, òké, ma ọ bụ ọbụna ọṅụ. M na-atụ aro ka ị gụọ: niile isiokwu na saịtị nke saịtị ahụ gam akporo (njikwa ntanetị, Flash, njikọ ndị ọzọ, na ndị ọzọ).
Bliss OS - Android 9 na kọmputa
Na mbụ na saịtị m edeworị banyere ohere nke ịwụnye gam akporo dịka ọrụ arụmọrụ zuru ezu na kọmputa (dịka na-emegide ndị emulators Android, nke na-agba ọsọ "n'ime" Os ugbu a). Ịnwere ike ịwụnye ezigbo xxx x86 ma ọ bụ kachasị maka PC na laptọọpụ OS nke arụmọrụ na kọmpụta gị, dị ka akọwapụtara ebe a: Otu esi arụnye gam akporo na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa.
Otu esi ejikọta keyboard, òké na ọṅụ na tablet ekwentị ma ọ bụ ekwentị
Ngwá ọrụ arụmọrụ nke Google na-akwado iji òké, keyboard, na ọbụna egwuregwupad (egwuregwu ọṅụ). Ọtụtụ ngwaọrụ gam akporo, mbadamba na ekwentị na-enye gị ohere iji eriri USB jikọọ pediprals. Maka ngwaọrụ ndị ọzọ ebe ejighị ojiji USB, ị nwere ike ijikọ ha wireless site na Bluetooth.
Ịtọpụta router site na mbadamba na ekwentị
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ị zụtara onye ntanetị Wi-Fi iji sọfụ Intanet site na ngwaọrụ mkpanaka gị, mana ị nweghị kọmputa ma ọ bụ kọmpụta iji setịpụ ya? N'otu oge ahụ, ntụziaka ọ bụla na-amalite site na ihe ị chọrọ ime na Windows ma pịa ya, malite ihe nchọgharị na ihe ndị ọzọ. N'ezie, a ga-ahazi onye na-ahụ maka redio site na mbadamba gam akporo na iPad ma ọ bụ ekwentị - yana na Android ma ọ bụ Apple iPhone.
Rar maka android
Ndị na-ewu ewu bụ ndị na-ewu ewu dịka WinRar maka nyocha Windows. Ihe ngosi ya bụ ihe doro anya: ọ na-adaba iji ya, ndị na-arụ ọrụ nke ọma, na-arụ ọrụ na ụdị nchekwa ihe ndị ọzọ. Hụkwa: ihe niile banyere gam akporo (nchịkwa ime, mmemme, otu esi emeghe) Tupu m nọdụ ala ide edemede a, elere m ọnụ ọgụgụ nke ọrụ nyocha ma chọpụta na ọtụtụ ndị na-achọ WinRAR maka gam akporo.
Otu esi ejikwa kọmputa ma ọ bụ ekwentị ma ọ bụ mbadamba kọmputa, tinyere iPhone na iPad
Ụbọchị abụọ gara aga, edere m nyochaa usoro TeamViewer nke na-enye gị ohere ijikọ na desktọọpụ dịpụrụ adịpụ ma na-achịkwa kọmputa iji nyere onye na-ahụchaghị ahụmahụ aka idozi nsogbu ụfọdụ ma ọ bụ nweta faịlụ ha, sava ndị na-agba ọsọ na ihe ndị ọzọ site na ebe ọzọ.
A gam akporo 5 Lolipop - nyocha m
Taa na m Nexus 5 melite na gam akporo 5.0 Lolipop bịara na m ngwa ngwa ịkọrọ m akpa anya na os os. Naanị: otu ekwentị nwere ngwa ngwa, na-enweghị mgbọrọgwụ, tọghachite na ntọala ntọala tupu imelite, ya bụ, dị ọcha nke Android, ruo ókè o kwere omume. Hụkwa: New Android 6 atụmatụ.
MMI koodu mgbochi na android
Ndị nwere ekwentị smartphones (ọtụtụ mgbe Samsung, ma echere m na nke a bụ n'ihi na ha dị elu) nwere ike ịchọta njehie "Nsokọ njikọ ma ọ bụ koodu MMI ezighi ezi" (Nsokọ njikọ ma ọ bụ koodu MMI na-adịghị mma na nsụgharị Bekee na "MMI koodu mberede" na ochie gam akporo) mgbe ị na-eme ihe ọ bụla: ịlele nkwụsịtụ, Internet fọdụrụ, tarifụ nke onye ọrụ ekwentị, wdg.
Igodo Ochie ekwentị igodo (oke nzuzo)
N'isiokwu a - ụfọdụ koodu "nzuzo" ị nwere ike ịbanye na dialer ekwentị ekwentị na ngwa ngwa ịbanye ụfọdụ ọrụ. N'ụzọ dị mwute, ha niile (ma e wezụga otu) adịghị arụ ọrụ na ekwentị ekpochi mgbe ị na-eji keyboard maka oku mberede, ma ọ bụghị na ọ ga-adị mfe karị ịmeghe usoro echefu echefu.
Anyị na-achọ ọwa Wi-Fi n'efu n'iji WiFi nyocha
Maka ihe mere ị ga - eji chọọ ịchọta channelụ nke netwọk wireless ma gbanwee ya na ntọala nke router, m dere n'ụzọ zuru ezu na ntụziaka banyere mgbaàmà Wi-Fi na-efu na ihe kpatara ntakịrị ọnụego data. Akọkwara m otu n'ime ụzọ m ga-esi chọta ọwa n'efu na iji usoro InSSIDer, Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere ekwentị gam akporo ma ọ bụ mbadamba, ọ ga-adị mfe iji ngwa ahụ akọwapụtara na isiokwu a.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ngwa mkpanaka 2020